Ama-SARM noma ama-Selective Androgen Receptor Modulators awuhlobo olusha sha lokwengeza oluthandwa kakhulu ngabakhi bomzimba. Abasubathi bathatha lezi zithasiselo ukuthuthukisa ukusebenza kwabo. Kalula nje, zisebenza ngokunamathisela kuma-receptors womzimba wakho we-androgen noma owesilisa. Kodwa-ke, banezakhiwo ze-anabolic, noma zokwakha imisipha ngokungafani nezinye izinhlobo zama-hormone regulators noma ama-steroids; Imiphumela yamaSARM ivumela ukulungiswa kwemisipha okusheshayo, okuvumela imisipha yakho ukuthi ithathe isikhathi esincane ukuthola kabusha.
Usosayensi uProfesa James T Dalton waba ngowokuqala ukukhomba ama-SARMS ekuqaleni kwawo-1990. UDalton uhlangabezane ne-SARM andarine ngenkathi ecwaninga ngokwelashwa komdlavuza wesinye. Ngemuva kokuthi uDalton akuthole lokhu, wabe esesungula enye i-SARM - i-ostarine. Lawa ma-SARM amabili athandwa kakhulu phakathi kwabadlali, ngisho namanje. Ukuthuthuka kwale mithi emakethe yomdlavuza kunciphile, kepha kwaduma phakathi kwabagijimi abafuna enye indlela ephephe kune-steroids.
Izinzuzo eziningi ziza nokuthatha izithasiselo ze-SARM. Kodwa-ke, baziwa kakhulu nge:
Ukugqugquzela nokugcina ukukhula kwemisipha emile
Ukusebenza okuthuthukile kwezemidlalo
Lapho bengezela kuma-SARM, abasebenzisi bangalindela ukuthola isisindo esibalulekile esikhathini esifushane. Isikhathi sangempela singaba side noma sibe sifushane ngokuya ngempilo yakho, inqubo yokusebenza, ukudla, isilinganiso, nokuzinikela osebenza ngakho.
Uma uphakamisa izinsimbi futhi uqonde ukusebenza nesazi sokudla, ungalindela imiphumela ethembisayo ngokuthatha izithasiselo ze-SARM. Uma umgomo wakho ukuthola imisipha, ungaqala nge-Ostarine, enye yama-SARM amadala kunawo wonke ake athuthukiswa, okusho ukuthi kudlule ezivivinyweni zentuthuko kakhulu. Njengakho konke, imiphumela izohluka. Akuwona wonke umuntu ongalindela noma okufanele alindele imiphumela yesikhashana noma esheshayo, kepha, uma uzihlomisa ngokuzivocavoca umzimba, ulwazi lokudla okunempilo kanye nolwazi jikelele lwezempilo nokuqina, ungathola imiphumela emihle emjikelezweni ngamunye.
Yimiphi Imiphumela Ongayithola Ku-SARM?
Ama-SAR athandwa kakhulu ngabakhi bomzimba ngenxa yezakhiwo zokwakha imisipha kanye nokusetshenziswa kalula uma kuqhathaniswa ne-anabolic steroids. Uma usebenzisa amaSARM ekwakheni umzimba, landela imiyalo ngokucophelela bese uthintana nodokotela wokudla uma unemibuzo. Njalo qala ngomthamo ophansi bese ukhuphuka kancane kancane. Imikhiqizo ethinta ukukhiqizwa komzimba we-testosterone yemvelo yakho ingcono ukuyisebenzisa isikhathi esifushane - amasonto ayi-8 kuye kwayi-12 ngasikhathi. Ngemuva kwalokho, kuzodingeka unikeze umzimba wakho ikhefu lamaviki ama-4 kuye kwayi-12, ngakho-ke alijwayeli kakhulu izinga elisha lamahomoni.
Izithasiselo zingasetshenziselwa ukunakekelwa, ukukhwabanisa noma ukusika, kepha njengakwezinye izesekeli, uzodinga ukuthola i-SARM ngenhloso ngayinye. Isitolo samaSARM sinezithasiselo ezahlukahlukene ze ukuzuza kwemisipha, ukulahlekelwa kwamafutha futhi izitaki zenguquko.
Ama-SAR akuvumela ukuthi uzuze imisipha ngokuthuthukisa ukukhuthazela kwakho, ubukhulu bemisipha, nobukhulu bamathambo. Kodwa-ke, zinikeza nezinzuzo zezempilo ezizothuthukisa impilo yakho yonke. Lapho uthatha ama-SAR, asikho isidingo sokukhokhela i-PCT yokulwa nokulahleka kwe-testosterone ngoba imikhiqizo yethu ayisoze yabeka engozini amazinga akho e-testosterone yemvelo.
Ukusebenzisa ama-SARM ukukhulisa ukulahleka kwamafutha kungakusiza ukuthi ushise amanoni anenkani ongahle uthwale kanzima ukuwalahla ekudleni noma ekuzivocavoca wedwa. Ezinye izinzuzo zezempilo nezesisindo zincike ekutheni hlobo luni lwezithako ozisebenzisayo. Isibonelo, izesekeli eziningi ziza nezinsizakalo ezengeziwe njengokuncipha kokuvuvukala, amandla angcono wenhliziyo, nokukhuthazela okwandayo.
Ngabe amaSARMS Ahluke Kanjani Kuma-steroid?
Iningi labantu liqhathanisa ama-SAR nama-steroids njengoba laba bobabili behlinzeka ngezinzuzo ezifanayo. Uma kuqhathaniswa ne-steroids, ama-SAR alandela uhlelo oluhluke ngokuphelele. Zingaba wusizo ngaphandle kokunikeza abasebenzisi imiphumela eyingozi ebangelwa yi-steroids. Kodwa-ke, ama-SAR anemiphumela emibi efanayo kuma-steroids; umehluko omkhulu ukule miphumela emibi 'ngamandla. Isibonelo, abasebenzisi be-SARM bangathola isicanucanu noma amazinga we-hormone acindezelwe, kepha ezingeni eliphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nokuthi basebenzisa i-steroids.
Ungayithuthukisa kanjani imiphumela usebenzisa ama-Sarms
Ama-SAR asebenza ngokuvuselela noma ukuvimbela ama-receptors athile kwizicubu zomzimba. Lokhu, ephepheni, kungasiza ukusekela imiphumela emihle nezinzuzo ngenkathi kukhawulwa noma yimiphi imiphumela emibi. Ucwaningo nobufakazi be-anecdotal busikisela ukuthi ama-SAR angakhuphula ngempumelelo ubukhulu bemisipha namathambo futhi athuthukise ukulahleka kwamafutha.
Eminyakeni emihlanu edlule, ukuseshwa okuku-inthanethi kwama-SARM (noma "ama-modulators we-androgen receptor modulators", kufaka phakathi i-andarine ne-ostarine) bekulokhu kukhula kancane. Yize ingekho indlela yokwazi ukuthi bangaki kithi abathengayo, ukuhlaziywa kwe "fatberg" yaseLondon edumile - inqwaba kawoyela nezinto eziphilayo ezitholakala emapayipini endle yenhlokodolobha - kutholakale amaSARM akhona ngobuningi obukhulu ukwedlula i-MDMA ne-cocaine.